Wararka - IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Dhexdhexaadinta antibody Degdega ah ayaa la heli karaa hadda
IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Dhex-dhexaadinta antibody Rapid Test ayaa la heli karaa hadda
Immunobio ayaa si habsami leh u soo saartay COVID 19 Dhex-dhexaadinta antibody Rapid Test, iyo xirmada tijaabada ee horeyba ula jirtay CE iyo Shiinaha oo la Ansixiyay。
1. IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Dhex-dhexaadinta Ka-hortagga antibody ee Degdegga ah (COVID-19 Ab) waxaa loogu talagalay keliya adeegsiga xirfadleyda.
2. Qeybiye kastaa waa inuu ka helaa ogolaansho ama ogolaansho ku haboon maamulka deegaanka ka hor inta uusan keenin tijaabadan degdega ah.
3. Imtixaanka 'IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Rapid Test' (COVID-19 Ab) waxaa loogu talagalay qaab tartan ah. Habka loo fasiro natiijada way ka duwan tahay baaritaanka COVID-19 IgG / IgM ama COVID-19
4. Imtixaanka Antigen. Hawl wadeenku waa inuu si taxaddar leh u akhriyaa tilmaamaha si loo isticmaalo ka hor inta uusan tijaabada qaadin
5. Shirkadeenu waxay ka diiwaangalisay badeecadan CE ay idman tahay CIBG. Waxaan sidoo kale ku taxnay Liiska Cad ee Wasaaradda Ganacsiga Shiinaha.
6. Waxaa jira mudo 5 maalmood oo shaqo ah oo lagu dalbanayo Shahaadada Ansixinta ee Maqaallada Gaarka ah ee ay soo saaraan xubinta caafimaadka iyo karantiilku. Macaamiishayada doonaya inay soo dejiyaan sheygan waa inay xaqiijiyaan amarka sida ugu dhaqsaha badan si loo soo gaabiyo taariikhda keenista.
IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Rapid Test (COVID-19 Ab) waa baaritaan deg deg ah oo lagu ogaanayo tayada ogaanshaha unugyada difaaca jirka ee dhexdhexaadka u ah SARS-CoV-2 ama talaalkiisa oo dhan dhiig, serum, ama plasma.
Loogu talagalay xirfadle ku ogaanshaha fitamiinada isticmaalka kaliya.
Faahfaahinta Xirmada: 20 T / xirmo, 1 T / xirmo.
Waa maxay SARS-CoV-2 Dhexdhexaadinta Dhexdhexaadinta?
Ka-hortagga unugyada jirka ee 'SARS-CoV-2' waa unugyo difaaca jirka oo xannibi kara soo gelitaanka unugyada ee fayraska SARS-CoV-2. Xaaladaha badankood, unugyada difaaca jirka ee dhexdhexaadka ah waxay xannibayaan isku darka RBD ee borotiinka S fayraska iyo soo dhaweynta ACE2 ee unugga. Haddii ay dhacdo in laga bogsado infekshinka ka dib, ama si guul leh loo tallaalo, noocyada difaaca jirka ee dhexdhexaadka ah ayaa la soo saaraa waxayna leeyihiin awood difaac ilaa waqti kale oo cudurka infakshanka SARS-CoV-2 ah.
Maxay tahay ujeeddada lagu ogaanayo difaaca jirka ee dhexdhexaadinta?
IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Dhex-dhexaadinta Antibody Rapid Test (COVID-19 Ab) waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo heerka xasaanadda ee unugyada difaaca jirka ee dhexdhexaadka ah ee dhiigga ku jira. Waxaa loo isticmaalaa in lagula socdo awoodda hal qof ee ka-hortagga fayraska SARS-CoV-2.
Si loola dagaallamo Cudurka faafa ee COVID-19, waxaan bixinnaa soosocodyada soosocda ee soo socda.
Coronavirus COVID-19 IgG / IgM Antibody Degdeg ah
SARS-CoV-2 Antigen Xaashida La Dhigay
SARS-CoV-2 Qalabka Baaritaanka Dhex-dhexaadinta Dhex-dhexaadinta
COVID-19 IgG / IgM Xaashida La jaray